Impendulo eKhawulezayo: Ngaba kuya kubakho umjikelo wama-25 we-Antm-BikeHike
Ngaba kukho umntu osweleke kwi-ANTM?
Kwakutheni ukuze iiJays zishiye i-ANTM?
Ngaba uAmanda Antm uye wayimfama?
Ngaba u-angelea Preston wenza imodeli?
Ngaba uJay Manuel ungumSpanish?
Uphi ngoku uMiss Jay?
Ngaba abagqatswa be-ANTM bayahlawulwa?
Ngaba i-ANTM ikhutshiwe?
Ngubani ophumelele i-ANTM Cycle 3?
Wenza ntoni uTiffany kwi-ANTM?
Ngubani ophumelele i-ANTM All Stars?
Ngubani ophumelele i-ANTM 18?
Ngaba uJay Manuel ungumIndiya?
Ngaba uTyra Bank utshatile?
Ngaba uMnu noNksk Jay batshatile?
Ixabisa malini iTyra Banks?
Ingakanani i-ANTM ebhaliweyo?
Ngaba ikhona i-ANTM eyenze ukuba ibe nkulu?
Ngaba u-CoverGirl ukhetha ophumelele i-ANTM?
Ngaba u-angelea Preston uphumelele i-ANTM?
Ngubani obe iikristale zika Amanda?
Ngaba kuya kubakho i-ANTM Cycle 21?
Mingaphi iminyaka kaEva ANTM?
Uneminyaka emingaphi uJay Alexander?
Uphi uBrittany ovela kwiModeli elandelayo ePhezulu yaseMelika?
Mingaphi imijikelo ye-ANTM ekhoyo?
Mingaphi iminyaka iTyra Banks?
Ngubani ophumelele i-Cycle 20 ye-ANTM?
Yayingowuphi unyaka uMjikelo wama-20 we-ANTM?
Ngubani ophumelele i-ANTM Cycle 21?
Inde kangakanani iTyra Banks?
Ngubani umzobi we-makeup kaTyra Banks?
Ungobuphi ubuzwe uMnumzana Jay osuka kwi-ANTM?
Mde kangakanani uJay Manuel?
Ngaba uTyra unomntwana?
Ngaba uTyra Banks unendoda?
UTyra noErik baqala nini ukuthandana?
Utshate nabani uNigel Barker?
I-Cycle 25 yoMzekelo oPhezulu oPhezulu waseMelika ngumjikelo ozayo owawucingelwa ukuba uza kuboniswa kwi-VH1 ngexesha elithile ngo-2019. Ukususela ngo-2020, akukho zibhengezo ezisemthethweni ezenziweyo.Indlu yeTrailer yeDragon - I-Loop. Cycle 25 Itshaneli yoqobo: VH1 Premiere: TBA Cycle Information Judges: Tyra Banks.
2016: UKimberly Rydzewski (umjikelo we-10) wafa ngoDisemba 19, 2016. Wayeneminyaka eyi-29 ubudala. I-2018: NgoDisemba 4, i-2018 uJael Strauss (umjikelezo we-8) wafa eneminyaka eyi-34 ngenxa yesigaba se-4 somhlaza webele.
Isigqibo sokuphuma kwi-ANTM, wathi, "yayiyi-100%" yakhe. Njengoko u-Manuel wachazayo, wayevakalelwa kukuba yayilixesha lokuba aqhubele phambili umsebenzi wakhe "kwicala elahlukileyo" kwindlela awazifumana ngayo emva kwemijikelo ye-18 ye-America's Next Top Model.
Usapho lukaSwafford lwafudukela ePlano, eTexas ngexesha lobuntwana bakhe. USwafford uyimfama ngokusemthethweni; ukhathazwa yiretinitis pigmentosa, imeko yamehlo ewohlokayo. USwafford uthe imeko iyakumshiya eyimfama ngokupheleleyo xa eneminyaka engama-30.
U-Angelea Preston ngumzekelo wefashoni waseMelika, owaziwa kakhulu ngokubonakala kwakhe kathathu njengomntu okhuphisana naye kwi-ANTM. Uvele kumjikelo we-12, we-14 nowe-17.
NgoLwesithathu ophelileyo, kwisiqendu se-E! I-podcast yeendaba nje, uManuel waqala ukuthetha nabalandeli ababesoloko bezibuza ngobuzwe bakhe. Ngaphandle kweengcamango, wacacisa ukuba akayena uLatino. Ngokwenene ungowaseMzantsi Afrika kwaye unobuhlanga obubini – unomzali omnye oNtsundu nomhlophe.
UAlexander okanye uMiss J, ngumntu wokwenyani waseMelika ongumabonakude kunye nomqeqeshi wenqwelomoya owaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe kwiModeli ePhakamileyo yaseMelika. Uhamba kakhulu kwimizi-mveliso yefashoni kunye nemodeli. UAlexander uhlala eParis nakwiSixeko saseNew York.
Abantu abakhuphisanayo be-ANTM bafumana umvuzo we-$40 ngosuku Uthi intombazana nganye yayihlawulwa “i-R40 ngosuku eyayisiya ekutyeni, kodwa yimali kuphela esiyifumanayo ngokwenza lo mboniso. USarah Hartshorne ayisiyiyo kuphela i-ANTM alum ukutyhila oko kwenzeka ngokwenene emva kwezigcawu.
Rhoqo, abantu balindele ukuba uninzi lwemiboniso kamabonwakude yokwenyani yenziwe kwaye ibhalwe ngabavelisi. Nangona kunjalo, oku bekungenjalo ngeModeli ePhakamileyo yaseMelika. Okumangalisayo kukuba, umboniso wawungabhalwanga konke konke, ngoko yonke into oyibonileyo yenzeka ngokwemvelo.
U-Eva Marcille Pigford (Umjikelezo we-3) KE: Omnye wabadlali be-ANTM abakhumbulekayo, uPigford waphumelela umjikelezo wesithathu kwi-2004.
U-Tiffany Richardson wayekhuphisana kwi-Cycle 4 ye-ANTM ngo-2005, apho waye wakhutshelwa ngaphandle kabini kunye noRebecca. Ngokungathandabuzekiyo elona xesha lingalibalekiyo kwimbali yoMzekelo oPhezulu, Uyaziwa ngokucaphukisa uTyra Banks kakhulu ekupheliseni kwakhe kangangokuba iiBhanki zabhenela ekumngxoliseni.
UManuel wazalelwa e-Springfield, e-Illinois kunina wase-Italiya kunye nowaseCzech kunye notata waseMzantsi Afrika onemvelaphi yase-Cape Malay.
UTyra Banks Height 5 ft 10 in (1.78 m) Umabonakude waseMelika oyiModeli elandelayo iPhezulu ITyra Banks Ibonisa iMelika inetalente yeFABLife Danisa kunye neNkwenkwezi (aba)qabane uErik Asla (2013–2017) Abantwana 1.
UJay uqhele ukugcina ubomi bakhe bothando buyimfihlo, kodwa ngeli xesha, intsomi yefashoni kunye nomntu owayesakuba ngumabonakude kubonakala ngathi uphila ubomi obubodwa, ngokukaLive Ramp Up. Nangona evaliwe malunga nobomi bakhe bothando, uJay uhlala exhasa amalungelo e-LGBT njengendoda evulekileyo ye-gay.
Ngokuka-Celebrity Net Worth, iTyra inexabiso eliqikelelweyo le-90 yezigidi zeedola ukusukela ngo-2020.
I-17) Ngokungafaniyo neminye imiboniso eyinyani, i-ANTM ayibhalwanga.
Epreli 10, 2018.
Uninzi lwabakhuphisanayo kwi-ANTM babona imisebenzi yabo iphucuka, kodwa kukho abathile abasinde kwisiqalekiso sikaTyra kwaye bafumana impumelelo emva kokuba kumboniso. Nangona uMfuziselo oPhezulu oPhezulu waseMelika ubanga ukuba ngumboniso wokhuphiswano lokumodela, bambalwa kakhulu imifuziselo ephezulu evele kolu thotho.
Kukho impikiswano eninzi ejikeleze iMelika elandelayo iModeli ephezulu: Zonke iNkwenkwezi ukususela ekupheleni kwangoLwesithathu, kunye nowayesakuba ngumgwebi wephaneli uJanice Dickinson akami nje ngokuzola ecaleni. "I-CoverGirl ngabo abakhetha imodeli - hayi nabaphi na abagwebi.
Ngaphandle kokuba nesiqalo esihle ngelo xesha, uPreston wamzisa yonke imiceli mngeni veki nganye, kwaye ekupheleni kwesizini, wathweswa isithsaba sophumeleleyo.
Esona senzo solwaphulo-mthetho sobukrelekrele, uEva the Thieva uthatha iikristale zika-Amanda aze azilahle ecaleni kweyacht ukufihla ubungqina.
U-Will Jardell wayengumgqatswa kumjikelo wama-21 we-ANTM ngo-2014. Wayengowokugqibela.
Ufunde kwiYunivesithi yaseClark Atlanta eAtlanta, Georgia; nangona kunjalo, wasishiya isikolo kamsinya emva kokuphumelela ixesha lesithathu leModeli ePhakamileyo yaseMelika eneminyaka eyi-19.
Iminyaka engama-63 (ngoAprili 12, 1958).
U-Brower usayine kunye noLawulo lweModeli elandelayo kwi-LA, iPasipoti eSan Francisco kunye noLawulo lweReel. Ukusukela ngo-2019, usayinwe kwiiModeli ze-TNG.
Akukho nto ifana nokungena eluntwini ukukunika ixesha lokuphinda undwendwele yonke “imijikelo” engama-24 (aka amaxesha onyaka) yeModeli ePhakamileyo yaseMelika, zonke ngoku zifumaneka kwi-Amazon Prime.
Iminyaka engama-47 (ngoDisemba 4, 1973).
2013 America's Next Top iModeli yoqobo womnatha womnatha I CW Original ukhupho Agasti 2 - Novemba 15, 2013 Uluhlu lwexesha lonyaka Uluhlu lweziqendu.
Umzobi we-Makeup uJay Manuel uvula ngobudlelwane bakhe noTyra Banks okoko wayeka kukhuphiswano oludumileyo, iMelika's Next Top Model ngo-2012.
Jay Manuel / Ubuzwe.
Iibhanki zaseYork uAsla.
Xa engabambisi “Ukudanisa neenkwenkwezi” kwaye esebenzela ukuvula ipaki yakhe yeModelLand, uTyra Banks ubonwe kunye nesithandwa sakhe, uLouis Bélanger-Martin.
Iphupha likaBhanki lokuba ngumama lazaliseka kunye nomfoti waseNorway uErik Asla. Aba babini baqala ukuthandana ngo-2013, kwaye unyana wabo wazalwa ngo-2016.
Umbuzo: Ngaba singayibuyisela iTyra kwi-Antm Cycle 24
Impendulo eKhawulezayo: Ngubani ophumelele umjikelo we-Antm 19
Umbuzo: Ngubani ophumelele i-Antm Cycle 21
Umbuzo: Ngubani ophumelele i-Antm Cycle 22
Umbuzo: Ngubani ophumelele i-Antm Cycle 1
Umbuzo: Ngubani ophumelele iCycle 20 Antm
Umbuzo: Ngubani ophumelele i-Antm Cycle 23
Ngubani ophumelele i-Antm Cycle 13
Impendulo eKhawulezayo: Ngubani ophumelele umjikelo we-Antm we-10
Ngubani ophumelele i-Antm Cycle 11
Umbuzo: Ngubani ophumelele i-Antm Cycle 18
Impendulo eKhawulezayo: Ngubani ophumelele umjikelo we-Antm 11